The Waa Ma Waaya-aragnimada Europe By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > The Waa Ma Waaya-aragnimada Europe By tareenka
Yurub waa qaarad aan caadi aheyn sahamiyaan! Iyada oo waxyaabo badan oo si aad u aragto, sameeyo oo la ogaado, waa meel ku fiican in la qorsheeyo aan dhammaadka lahayn, Europe mara tareen.
YURUB khibradaha TAREENKA – HORE STOP, LONDON:
waayo-aragnimada kale oo Europe tareen waa bilowdo in London! Waxaa la sheegay in “Maalin xun London wali way ka fiican tahay maalin wanaagsan meel kasta oo kale.” Sidaas, aynu halkaas bilaabaan! waa wayn yahay Harry Potter Tour ee Warner Bros. studio xitaa haddii aadan yihiin a super-taageere. The technology, lagu daydo oo ka danbeeya-the-Muuqaallo waa caajiib iyo sidoo kale qiimihiisu uu arko. On spellbinding this 6 safar laba saacadood, bal eeg nooc asalka ah sida Platform 9 ¾ iyo Diagon Alley; arki tareenka uumi Hogwarts Express; kortaan broomstick la mid ah kabka, iyo waxyaalaha qarsoon ka danbeeya-the-Muuqaallo ee filimada ee 'on-screen wizardry qaawiyo,. Tani studio Harry Potter London safar waxaa ka mid ah tababaraha wareega safarka gaadiidka iyo tigidhada laga galo Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan London Harry Potter Tour ee Warner Bros. Studio la Admission halkan.
PARIS: YIRAAHDEEN HAA’ KU SAABSAN FANAANAD KU JIIDAYSA JAAHILKAAGA
Your soo socda aragnimada Europe tareen waa in ay ahaataa in Paris. In waqtiga Picasso ee, Montmartre ahayd janno Bohemian la inta badan la cabbo godad iyo soo afjarmay a hilltop buuxiyey wuxuu galay guriga taliyaha a qoob ka raffish jeestay. maanta, Place ee du Tertre hooska Cœur Sacre waxaa ka buuxa farshaxan, kuwaas oo diyaar qabsan doonaa eg. Waxaas dabadeed, booqo qolweyne fanka ugu caansan dunida ee, doon Lavoire ah, halkaas oo Picasso rinji iyo Braque, Juan Gri, iyo Modigliani mar noolaa.
Fuuli sallaan EE aragnimadaada YURUB BY tababar la sixir MONTJUIC THE:
Ka dib markii aad safarka tareenka ka Paris, aad Waaya-aragnimada Europe soo socda ay tareenka waa in ay Barcelona. Hadda, ka hor inta aan bilaabo aynu ku dhaqmaan sida loo odhan tani magaalada caadi mispronounced. ku hadla badan oo Ingiriisi isku dayaan inay ka dhawaajiyaan ‘dheeraad ah oo Isbaanish‘ by ugaga ah 'c’ in Barcelona sidii 'th’ iyo oo wuxuu ku yidhi 'Bar-the-lona'. Laakiin Catalan (Afka Catalonia, halkaas oo Barcelona waa la helay), ka 'c’ Waxaa loogu dhawaaqaa sida "s’ – si 'shiraac Bar-up’ waa ku dhawaaqida saxda ah.
Hadda oo aan ka baxay, oo jidka, aan ka hadalno buurta Montjuïc. Tanu waa meesha ugu fiican ee Dooxa caleenta leh views qurux badan. Hubi in aad heysato aad socodka (ama ordaya haddii aad doorbidayso) kabaha on, sida ay qaado qayb ka ah legwork oo ay halkaas u hesho ilaa, laakiin tani waxay ka dhigan tahay waxa yar isugu by dalxiisayaasha kale. Marka laga soo tago ee ku hareeraysan dabiiciga ah iyo Vistas cajiib ah, waxaad ka heli doontaa dhismayaasha ka 1992 Ciyaaraha Olympic, oo ay ku jiraan Palau Sant Jordi iyo munaaradda isgaarsiinta ee uu naqshadeeyay Santiago Calatrava.
Prague: Dooxa weheliyaan BRIDGE A Dr Makumbe qorrax dhaca
Prague loo yaqaan wadnaha ee Europe. Tani waxay u qurux badan oo xoogaa dahsoon magaalada waa waajib-arki on your Waaya-aragnimada Europe by safarka tareenka. qarnigii 14aad Charles Bridge gudbo River Vltava la bulk weyn oo ka mid ah 1000-qalcaddii sano jir ah shiddadii iyo gadaashiisa,. Dhab ahaantii Fun; ilaa 1841, waxa uu ahaa jidka keliya ee wabiga ka gudbaan ka Town ee Old!
qurbaanka views cirfiid-Sheeko, buundada dhagax Gothic ku lugeynaya-kaliya ayaa la damacsan leh 30 Sidaana quduusiintii iyo ugu fiican booqday hore fiidkii marka qorraxdu waa dejinta. haddii aad halkaas tahay oo aad kale oo muhiim ah, taas oo ka dhigaysa for a aad u taataabtay goob.
Venice: HELI ON GONDOLA A!
Tani waxay u ekaan kartaa cheesy, laakiin markii aad u tagto Venice, fuushan Gondola ah magaalada dhex mara oo run ahaantii waa waajib. Ka sokow iyagoo xiiso leh iyo jaceyl, waxa kale oo sida ugu fiican ee si aad u aragto magaalada! Maalintii la joojiyo off adigoo booqanaya Harry ah horyalka Talyaaniga ee Bar for Bellini ah dhiig cusub. Tani waa casiir miro caddaan iyo prosecco, halkaas oo is biirsaday la Been abuurtay by aasaasaha bar ee.
Our Asia iyo Europe aragnimada tareen waa Istanbuul gaarka ah
Istanbul caan ku tahay Masaajidka Blue. Inkasta oo aan samayn this talinaynaa, Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan soo jiidano dareenkaaga Istanbul waxay ku taal cirifka khibradaha Yurub tareen, sida ay u dhaw in ay Asia ka badan in Europe.
Istanbul ma aha oo kaliya soo jiidasho leh ka sarreeya dhulka, laakiin sidoo kale dhulka hoostiisa la ceelkiisa Basilica ee (Basilica ee). Tani waxay gabal fiican of injineernimada Byzantine waa a neefta-qaadashada ceelkiisa dhulka hoostiisa, mar keeno biyo la cabbo oo la beeblayne ka hadda Bulgaria in Istanbul. Ka fikir iftiin diiran, oo sanqadha biyo go'in jilicsan oo ay weheliso ciyaaro music classical ee asalka ah. Tuman socdo iyo daawado dabaasha kalluunka dhexeeya ee 336 columns in ay taageeraan saqafka.
Tag SaveATrain.com si aad u ballansato safarkaaga tareenka ee soo socda 3 daqiiqo, at the heerka tigidhada tareenka ugu jaban.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-experiences-by-train%2F%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
caarada tababarka talooyin tareenka tareen safarka travelfrance travelitaly travelspain turkey